Igqamile, ivulekile, Ukubukwa kolwandle kanye nenja - I-Airbnb
Igqamile, ivulekile, Ukubukwa kolwandle kanye nenja
Duncormick, Wexford, i-Ireland
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Valerie
Sinekamelo elilala abantu ababili elikhulu eligqamile (elinokubukeka kolwandle kanye neziqhingi zase-Saltee) elinendlu yokugezela ehlukile elinde ukufika kwakho. Sinengadi enkulu futhi sihlezi eduze ne-Kilmore Quay enhle. Indlu yethu ifanele izinja - sinezinja nezinkukhu zethu!
Indlu yethu itholakala emgwaqeni othulile wezwe obonisa iziqhingi zase-Saltee ezitholakala ogwini lwase-Kilmore Quay. Sinezinja ezingu-2 ezinobungane nezinkukhu eziningi ezizulazula ezingadini. Singayamukela inja yakho uma uhamba nabo ngeholide. Siyacela ukuthi inja yakho igcinwe ihola uma ingaphandle engadini njengoba izinkukhu zethu zihambahamba ngokukhululekile.
Uma kuyindawo ephumuzayo, ethulile futhi esekhaya oyifunayo uze usivakashele - silindele isinyathelo sakho emkhawulweni wethu.
I-Duncormick yidolobhana elihle elinendlu yomphakathi kanye nesonto kulo. Indlu yomphakathi (ama-Sammies angadumile) i-Sinnotts inabo bonke ubuhle be-pub yendabuko yase-Ireland, kumelwe ubone ukuthi usendaweni yini. Ngeshwa okwamanje (ngo-June 2021) i-pub ayivuli.
Kukhona umfula omuhle odlula edolobhaneni uhamba ngezinyawo ezinhle eceleni kwamabhishi ayo.
Sizoba lapha ngesikhathi sokuvakasha kwakho futhi sizojabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo yakho futhi sikunikeze noma yimiphi imininingwane ongayidinga noma oyifunayo.